धनधान्यकी देवी लक्ष्मीलाई खुसी पार्न यी ५ काम गर्नुहोस् ! « News24 : Premium News Channel
काठमाडौँ । दीपावलीअघि वा दीपावलीको दिन तपाईंले अनेक प्रकारका कामहरू गर्नुहुन्छ । तर दीपावली गर्नुभन्दा अगाडि केही विशेष काम गरेमा तपाईंकाे घरमा लक्ष्मी प्रसन्न हुने कुराबारे सायदै तपाईंलाई जानकारी होला !
प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्षको औँसीमा दीपावली तथा लक्ष्मीपूजा मनाइन्छ । यसपटकको दीपावली आज (बिहीबार) परेको छ ।
दीपावलीका दिन धनधान्यकी देवी लक्ष्मी भित्रिन्छन् भन्ने आम जनविश्वास छ र यसैका लागि दीपावली गर्दै लक्ष्मीपूजा गरिन्छ । जब माता लक्ष्मी तपाईको घरमा आउछिन्, तब तपाईका ती ५ विशेष काम देखेर खुसी हुनेछिन् ।
संस्कृति विज्ञहरुका अनुसार घरमा दीपावली गर्नुअघि यी काम गर्नुहाेस्–
१) लिपपोत/रङरोगन : वर्षातको समयमा घरभित्र रंग तथा इनामेल उप्किने, ढुसी पर्नेजस्ता कामले घर फोहोर भएको हुन्छ । तब वर्षात् समेत सकिएपछि आउने तिहारका बेला सम्पूर्ण घरको सफाइ गर्न र रङरोगन एवं लिपपोत गर्न आवश्यक छ । मान्यता अनुसार जहाँ बढी सरसफाइ र सुग्घर देखिन्छ, त्यही नै लक्ष्मीको वास हुन्छ ।
२) वन्दनवर अर्थात् विशेष माला : आँप वा पिपलको नयाँ नरम पातको मालालाई वन्दनवर भनिन्छ । यो प्रायः दीपावलीको दिन ढोकाको माथितिर बाँधिन्छ । यी पातहरूको मीठो सुगन्धबाट आकर्षित भएर देवताहरू घरमा प्रवेश गर्छन् भन्ने मान्यता नै यसको सुन्दर तथ्य हो ।
३) दैलोलाई सुन्दर बनाउनुहोस् : दीपावलीमा मूलढोका र दैलोको धेरै महत्त्व छ । यदि दैलोमा टुटफुट भएको, चर्किएको छ भने यसलाई मर्मत गर्नुहोस् र बलियो एवं सुन्दर बनाउनुहोस् । हाम्रो घरमा कोही पस्यो भने दैलो पार गरेर मात्रै आउन सक्छ। सीधै घरभित्र पस्न सकिँदैन । लक्ष्मी भित्र्याउन पनि साजसज्जा गरेर दैलो र ढोका सिँगार्ने गरिन्छ ।
४) रंगोली : रंगोली वा मण्डला शुभदायक मानिन्छ । यस कलालाई चौसठी कलाभित्रै स्थान दिइएको पाइन्छ । चाडपर्व र धेरै शुभ अवसरहरूमा घर–आँगनलाई रंगोलीले सुन्दर ढंगले सजाइन्छ । यसो गर्नाले घर–परिवारमा सधैँ मंगल र सौभाग्य प्राप्त हुन्छ ।
५) दियो/बत्ती : परम्परागत दियो या बत्ती बाल्ने भाँडो माटोको मात्र बनाइन्छ । यसमा ५ तत्व छन्– माटो, आकाश, जल, अग्नि र वायु । हिन्दू रीतिरिवाजमा पाँच तत्वको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । त्यसैले माटोबाट बनेका पाला या बत्ती बाल्नुहोस् । अझ धनतेरसकै दिनबाट दियो र बत्तीहरु बालेर घरलाई उज्यालो बनाउनुहोस् । यो देखेर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुनेछिन् ।
काठमाडाैं । प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने विवाह पञ्चमी पर्व आज श्रीरामचन्द्र र सीताको
स्वयम्भूमा पुजारीले पूजा गर्दै गर्दा चोरियो आकाश भैरवको मूर्ति
काठमाडौं । मंगलबार बिहान पूजा गरिरहेको अवस्थामा स्‍वयम्भूबाट आकाश भैरवको मूर्ति चोरी भएको छ। हलचोकस्थित